नेपाली कांग्रेससँग माओवादीको यस्तो सहमति : कृष्णबहादुर महरा पुन: अर्थमन्त्री !
ARCHIVE, MUDRA MAMILA, SPECIAL » नेपाली कांग्रेससँग माओवादीको यस्तो सहमति : कृष्णबहादुर महरा पुन: अर्थमन्त्री !
काठमाडौँ - पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेका कृष्ण बहादुर महरा पुन: अर्थमन्त्री हुने भएका छन् । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वमा बन्ने आगामी सरकारमा पनि कृष्णबहादुर महरालाई अर्थमन्त्री बनाउने सहमति बनाएको हो ।
सरकारको आयु ६ महिनामात्र भएकाले यस्तो निर्णय भएको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । 'कांग्रेसले गइरह नै लिने र माओवादीले अर्थ नै लिने भन्ने मोटामोटी सहमति भएको छ । यसले समग्र सरकारलाई पनि राम्रै हुनेछ । कृष्णबहादुर महरालाई पुन: अर्थ मन्त्री बनाउने कुरामा प्रचण्डले बचन दिइसकेका छन् भने देउवापनि त्यसमा सहमत भइसकेका छन् ।' सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी एक नेताले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।